Ndị Cobblers Havemụaka enweghị Akpụkpọ ụkwụ | Martech Zone
Tuesday, January 26, 2010 Na Tọzdee, Septemba 1, 2015 Douglas Karr
Yesnyaahụ m zutere na a ọkachamara ọkachamara ebe a obodo. Ọ bụ nnukwu nzukọ na enwere m ekele maka nzaghachi siri ike m natara gbasara saịtị m. N'ikwu ya n'ụzọ dị mfe, agbagoro m ebe nrụọrụ weebụ na-adịghị ọcha otu ọnwa isii gara aga, ọ dịtụbeghị mgbe m gbanwere ya.
Enweela m ọrụ sara mbara site na enyemaka nke Mark Ballard na saịtị ọhụrụ… wepụrụ ụfọdụ ndị nnọchi anya iStockphoto. Ọ ga-abụ ihe ịtụnanya - ọ bụrụ na m nwere oge iji mechaa ya.
Eziokwu bụ, ejighi m n'aka na m ga-eme ya mgbe nwee oge ịkwụsị ya. Ya mere… M ghọgburu na hụrụ a kediegwu isiokwu na m nwee ike ịzụta ma hazie na a okwu nke awa. Ọ debere m ruo ihe dị ka elekere anọ nke ụtụtụ n'ụtụtụ a, mana saịtị ọhụrụ ahụ dị mfe, ruo n'ókè, ma nye ozi niile mmadụ chọrọ gbasara ihe ọ bụ DK New Media eme.
Emebiri m otu n'ime iwu m mepụtara - na-etinye ọdịnaya ahụ na mkpụrụ edemede ọcha n'ọchịchịrị gbara ọchịchịrị. Nke ahụ na-eme ka o sie ike igwu ala; Agbanyeghị, m niile gbasara glitz na saịtị a ma anaghị etinye uche m na njide ndị ọbịa. Otu saịtị a dị ezigbo iche (hụ na ịnyagharịa wee pịa site na ngalaba ọrụ).
A ga - enwe ngalaba ndị mmekọ n'ọdịnihu dị nso ebe ọ bụ na nke ahụ bụ ọtụtụ akụkụ azụmaahịa m. Ka m mara otu ị masịrị ya ruo ugbu a!
Tags: DK New MediaWordPresssaịtị mkpesa
HTML Email + Alt Tags = A Na-erekarị Bagels